Hen endlini iyindawo lapho izinyoni ukuchitha isikhathi sabo esiningi. Lapha abakwazi kuphela ulale udle, kodwa futhi ukufihla kusuka sezulu esibi. Ngenxa yalesi sizathu, kubalulekile ukuthi indlu senziwa ngendlela efanele futhi kahle. Futhi, ungenzi inkukhu coops izinkukhu ngesikhathi 10 likhulu kakhulu.
Ngokuvamile esetshenziswa njengoba indaba ka ebhodini noma ugongolo. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga indlu ngomumo eyenziwe, kodwa awukwazi ukuhlangabezana nazo zonke izidingo. Ukuze ukwakha ngehhoko inkukhu, akudingekile ukuqasha ochwepheshe, ungakwenza konke wena. Isinyathelo sokuqala ukuthatha isinqumo sokuthi kwi-project, bese ukuthenga amabhlogo wokwakha kudingekile, ukuze uqalise.
Kungakanani isikhala udinga izinkukhu?
Ngaphambi kokuthi uqale ukwakha indlu izinyoni, kubalulekile ukubhekana lingakanani. Ngakho, ubukhulu ngehhoko inkukhu for 10 izinkukhu :. Ububanzi - 1 m, ubude - 2 m, ukuphakama - 1.5 m Ngesikhathi kwakhiwa indlu, udinga ukukhumbula ukuthi izinyoni kudingeka izibani okuhle. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi akufanele sibeke isakhiwo ezindaweni ezimnyama.
Kepha perches, khona-ke kungcono ukukhweza ukuphakama ngamasentimitha hhayi ngaphansi kuka-60. Izinkukhu nokuzama ukukhuphuka umqansa njengoba eliphezulu ngangokunokwenzeka. Kunconyelwe kakhulu perches amabhodi ububanzi, njengoba inyoni iyohlala ungakhululekile.
Kungcono ukwenza flooring ukuze indle waphaphama emabhokisini ezikhethekile noma iziqukathi. Lokhu kuzokwenza lula umsebenzi wokunakekela inyoni. Ngakho ngokusebenzisa izimbobo ezinjalo akufanele kudlule umoya abandayo futhi umswakama, ukuze izinkukhu akazange agule.
Indawo I-ngehhoko inkukhu
Izinkukhu uthanda ukushisa kanye akakubekezeleli okusalungiswa. Lokhu kusho ukuthi iphrojekthi hen indlu 10 izinkukhu, kumele yakhelwe ikhumbula izibani okuhle. Indawo kufanele ibe flat njengoba indlu owakhe entabeni, uzobe kushaywa umoya, futhi shelwe ukucindezeleka - nesimo olumanzi.
Ukufinyelela ebiyelwe kufanele zitholakale ohlangothini lwaseningizimu. imisebe Morning nemfudumalo njengoba ngehhoko inkukhu ngisho izinsuku ebusika, ngakho ngeke wesabe frost. Izinkukhu izimpilo esenziwa yilanga, okungukuthi, izikhukhukazi uqale niphaphame ukuba imisebe yokuqala ilanga.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kuryam badinga indawo ukuhamba, kodwa kungcono buyela ke. Ukuzivocavoca egcekeni kumelwe ibekwe endlini.
Imisebenzi ngehhoko inkukhu
Ukuze ukwakha ehlobo eqinile noma lezinkukhu ebusika ngoba 10 izinkukhu, kumele izimo eziningana kuhlangatshezwane nazo:
Ngaphambi kokuba uqale ebeka isisekelo, ukuhlukana ungqimba phezulu inhlabathi 35 cm.
Izwe ozinikele ukwakhiwa wawa ngomnikelo omncane elele ka isihlabathi futhi amatshe. ukuphakama kwalo kufanele ibe mayelana 10 amasentimitha.
I formwork kufanele wenziwe kwamapulangwe. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma Uhlonze lwalo kuyoba 25 amasentimitha.
Setha isidumbu Ukuqinisa ukushuba 8 kwangu. Ungabese uthele sha ukhonkolo M300. usayizi pad kumele ifane endaweni ikusasa ngehhoko inkukhu. umsebenzi Ngaphezu kwalokho kungenziwa nje 3 amaviki.
Floor ogibele zokhuni, okuyinto amanga isisekelo.
Lapho ukuklanywa umdwebo ngehhoko inkukhu izinkukhu 10 yasungulwa, futhi asisekho isisekelo isivele egcwele, ungakwazi ukuqhubeka ukufaka flooring. Eyokwakha phansi izinto zemvelo asebenza kangcono, kubalulekile ukuthi lomile kuthiwa. Izinto kakhulu usimende amabhodi noma uJakobe amakhoba.
Ngokuhamba phansi main kuyadingeka ukubeka udoti, ezizohlinzeka ku nokuhlanzeka henhouse nenhlanzeko. Ungasebenzisa izinto ezifana oqoshiwe utshani, isihlabathi noma sawdust. Ebusika, kungcono ukubeka udoti 20-25 amasentimitha, ukuze inyoni kodwa ngakhula kahle.
Ukwakha kahle ngehhoko inkukhu for 10 izinkukhu, odinga ukukwazi ezinye imithetho, okungukuthi ubuchwepheshe ekwakheni izindonga eziqinile. The best izinga kukhona itshe, isitini noma ilahle block, kodwa abakwazi ukuba agcine eziningi ukushisa ukuthi idinga ukuba inyoni. Ngoba indlu inkukhu ugodo engcono efanelekayo noma izingodo. Izindonga zakhiwe lezi zinto, okuhlala, futhi okubaluleke - Lizoqhubeka ukushisa. Winter inyoni izindlu angasebenzisa adobe izitini. Wenziwe utshani nobumba.
Izindonga asethwe ku indlela ethile yokuma:
Uhlaka lokuqala yakhiwa izingodo.
Ungabese ukuya ukufakwa izindonga ngokwabo. clapboard yabo engcono phakathi kwabo for ukwahlukanisa ingasetshenziswa njengendlela amaminerali uboya sawdust.
Njengoba Plating ingasetshenziswa ipulangwe, amabhodi noma battens.
Ukufakwa ophahleni nophahla
Into ebalulekile iwukuba kophahla cottage ezinyonini, njengoba kungaba silondoloze ukushisa futhi kuvimbele umswakama ukungena endlini. Inkukhu coops 10 izinkukhu kufanele kubekwe umkhawulo emiholweni yezimenenja, ngoba umoya notshwala efudumele phezulu bavame.
Yiqiniso, ungafaka ophahleni nomunye yokuma kwayo indawo, kodwa ke emthambekeni kufanele kube emnyango emanzini emva kwemvula singenalo angena egcekeni ngezinyawo.
Imigomo ekwakhiweni kophahla nophahla:
Uphahla kufanele babe ezimbili kummango. Le ndlela ukugeleza kwamanzi neqhwa ngeke icabange ophahleni. Ngosizo endlini semishayweni kungaba kakhulu kunalokhu.
Ukuze ukulingana ophahleni esehlanganise izinto ezifana tile, slate ukufulela noma umhlanga.
Ophahleni kuyadingeka ukuze vimbela noboya amaminerali. Ngemva ukufudumala ungaya isikhumba. Okuhle kunakho konke ukuthi uphahla sheathe chipboard.
Kudivayisi nokushaya komoya
Abanye bakholelwa ukuthi kwanele ukufaka izindonga, phansi nophahla, kodwa eqinisweni akugcini. Isici esibalulekile ekwakhiweni endlini ngoba izinyoni ukupholisa. Ukuze kukhanyisa ukupholisa of inkukhu coops for 10 izikhukhukazi kumelwe namafasitela.
Uma isakhiwo kuyinto exchange ezinhle emoyeni, le nyoni enempilo futhi ithele. Kubalulekile ukufaka ipayipi ukuzwakalisa noma ifasitela elincane ukupholisa. Umgodi lokuqala kufanele esisogwini akhela, simulating kwenzakalani. Vent pipe engcono ahlele ukuba okungenani isigamu imitha kusukela iphezulu. Ngenxa ipayipi endlini Siyonikwa umoya ohlanzekile.
Inkukhu coops 10 izikhukhukazi Kufanele ube elula ukufinyelela umnyango ikuvumela ukuthi inyoni ukuya sishaywe. Laz is best ibekwe eduze isicabha.
Ukwakha ngehhoko inkukhu, akusho ukuthi anamathelane samuntu izakhiwo Lodge. Okwamanje, kukhona ukhetho olukhulu ongakhetha ukwakhiwa. Konke kuncike okuthandayo futhi ukunambitheka. Omunye ofana izindlu zakudala elingunxande, kanye nezinye - isikhala esingunxantathu.
Iyiphi indlela noma ngabe akhethiwe, kubalulekile ukuthi lesi sakhiwo wayengumJuda ukhululekile futhi efudumele. Kahle isakhiwo esakhiwe eyonikeza induduzo ukuze izinyoni, kanye Sebawoti - inzuzo.
Paddock ngoba yenkukhu
Esimweni lapho ephethwe ukwakha ngehhoko inkukhu for 10 izinkukhu, futhi elihlangabezana nazo zonke izidingo, ungakwazi uqhubekele engxenyeni yokugcina ukwakhiwa. Isinyathelo sokugcina ukwakhiwa yendlu esihle ukwakhiwa ukuhamba inyoni.
Ukuphakama ebanga kufanele kube ngu-180 ngamasentimitha, kanye ubude nobubanzi - emayelana ezimbili amamitha. Indawo eyayakha metal noma ngehele plastic. Ingxenye engezansi eheleni kufanele igqitshwe ngesikhathi 30 amasentimitha ukujula. Lokhu kuzokwenza ukuvikela izinyoni ezilwaneni eziyingozi namagundane. Okuhle kunakho konke ukuthi engxenyeni engezansi amapulangwe anezikhala sheathing.
Kuyadingeka ukuba uhlela Paddock phezulu ukuvala net. Lokhu kuzovimba indiza wezinyoni omdala phezu inetha.
Lapho indlu yakhiwe, futhi Paddock ebiyelwe off, ungaqala izinyoni lokuqala ngokushesha obzhivut endaweni entsha. Ngo inkukhu eyakhiwe kahle lezinkukhu izinyoni kuyoba ifudumele ngisho ebusika.